« Alina an-gitara » : hiray sehatra ry Tselonina, Fara Gloum ary Farakely | NewsMada
« Alina an-gitara » : hiray sehatra ry Tselonina, Fara Gloum ary Farakely
Par Taratra sur 31/05/2016
Fiarahana tsy vaovao, saingy irarian’ny mpankafy hatrany… Fantatra fa hiray sehatra mandritra ny “Alina an-gitara”, izay hotontosaina ny alin”ny zoma 3 jona izao, etsy amin’ny efitrano malalaky ny PK 00, Garan’i Soarano ry Tselonina, Fara Gloum ary Farakely.
Tsy vaovao satria ansian’ireo nampiara-peo sy nanaingo ireo hiran’i Tselonina i Fara Gloum. Nandray anjara tao anantin’ilay rakikira navoakan’Ingahibe Rainitse farany rahateo izy. Mpiaraka an-tsehatra, satria samy mandrafitra ny feo ao amin’ny tarika Randrantelo kosa i Fara Gloum sy Farakely. Maromaro ihany koa ireo hiran’i Tselonina fanaon’izy ireo rehefa miaka-tsehatra.
Araka ny nampitain’ny mpikarakara, hizara telo miavaka tsara ny seho. Samy haneho ny talentany tsirairay avy Ingahibe Tselonina, Fara Gloum ary Farakely. Manaraka avy eo ny fampiaraham-peo roa na telo. Tsy voatery ny hiran’Ingahibe Tselonina ihany fa hisy ihany koa ny hira hataon’izy mirahavavy.